MacBook Pro oo leh qalin Apple. Ma arki doonnaa dhowaan? | Waxaan ka imid mac
Ha welwelin, waxaan aad uga xanaaqnay sawirka. Waqtigan xaadirka ah, waa uun fikradda (dhab ahaantii, dhab ahaan) ka yimid naqshadeeye kaas oo ku saleysan shatiga la siiyay Apple, wuxuu malaynayaa sida MacBook -ka Apple Pencil -ku u ekaan doono iyo meesha lagu kaydin doono.
Laakiin laga yaabee halkii “hal -abuur” a MacBook -ka taabashada leh qalinka Apple, Apple waxay aad ugu fududaan lahayd oo kaliya iyadoo la waafajinaysa macOS iPad -ka cusub ee leh processor -ka M1, oo dhibaatada la xaliyo, sax?
Toddobaadkii hore Apple ayaa la siiyay abaalmarin cusub Patent gudaha Mareykanka Waxay faahfaahineysaa sida ay u noqon doonto ku -biirinta Qalin -qori Apple oo laga saari karo keydka MacBook. Waxay lahaan doontaa xoogaa shaqo labadaba la geliyo laptop -ka, iyo banaanka shaashadda, sida ay ku dhacdo iPad -yada.
Oo ku saabsan fikraddan, naqshadeeye Sarang sheth waxay abuurtay fikrad 3D ah oo ah sida patentkani noqon doono kaas oo sharxaya suurtagalnimada in lagu qoro Qalin Apple MacBook. Sida aad ka arki karto sawirrada, MacBook Pro -kan cusub, dabcan, wuxuu ku lahaan doonaa dhaqdhaqaaqyo taabasho leh Qalinka Apple shaashadda isagoo weli sii haya Bar yar oo taabasho ah oo loogu talagalay Siri iyo marin -u -helidda codsiyada kale.
MacBookgu wuxuu leeyahay qol uu ku fadhiyo Qalin Apple iyo Bar yar oo Taabasho ah.
Craig Federighi Ma aha hawsha keenista shaashadda taabashada ee Mac -yada. Dhawaan ayuu si cad uga hadlay in bilicda Big Sur ay hubaal tahay in laga dhaxlay iPhone iyo iPad. Badhamada ayaa ka weyn, oo leh boos badan, tanina waxay keentay in adeegsadayaal badan ay u maleeyaan inay ka dhigayso mid ku habboon faragelinta farta, laakiin Apple ma damacsan tahay inay shaashadaha taabashada ku dhejiso Mac -yada.
Sidii aan soo sheegay bilowgii, halkii laga fikiri lahaa MacBook leh shaashadda taabashada iyo Apple Pencil, waxa ay shirkaddu yeeli lahayd ayaa ah inay si fudud ula qabsato macOS Monterey midka cusub. iPad Pro M1, iyo dhibaatada la xaliyay. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » MacBook Pro oo leh qalin Apple. Ma arki doonnaa dhowaan?
Astaamaha IWork waxay ku heli doonaan dib -u -habeyn macOS Monterey